राेचक खबर – Lok Sangit Parakhi
काठमाडौं- पापदेखि डराउने मनुष्यले कामिका एकादशीको व्रत र विष्णु भगवानको पूजन अवश्यमेव गर्नुपर्दछ । पापरूपी हिलोमा फसेका र संसाररूपी समुद्रमा डूबेका मनुष्यका निम्ति यस एकादशीको व्रत र भगवान विष्णुको पूजन अत्यन्त आवश्यक छ । यस अवसर भन्दा ठूलो पाप नाश गर्ने मौका पाउन गाह्रो छ । कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरले भन्नुभयो – हे भगवन, अब कृपा गरेर श्रावण कृष्ण एकादशीको के नाम हो र यसको पालनाको के विधान छ त्यो बताउनुहोस् । श्रीकृष्ण भगवानले आज्ञा गर्नु भयो हे युधिष्ठिर ! यस एकादशीको कथा एक पटक स्वयं व्रह्माजीले देवर्षि नारदसित भन्नु भएको थियो, त्यसैलाई म तिमीलाई भन्दछु । नारदले ब्रह्मासित सोधे कि हे पितामह ! श्रावण मासको कृष्ण पक्षको एकादशीको कथा सुन्ने मेरो इच्छा छ, त्यसको नाम के हो ? के विधि छ र त्यसको माहात्म्य कस्तो छ, यी संपूर्ण विवरण कृपा गरी बताउनुहोस् । नारदजीका यस्ता वचन सुनेर व्रह्माज
शल्यक्रियाका बेला धेरै मानिसहरु बेहोस हुन्छन् । तर एक महिलाले आफ्नो दिमागको शल्यक्रियाका क्रममा पारम्परिक इटालियन ओलिभ पकौडा बनाएकी छिन् । ११ जना स्वास्थ्यकर्मीको संलग्नतामा साढे दुई घण्टा चलेको शल्यक्रियामा महिलाले ९० वटा पकौडा बनाइन् । इटीलीमा यी पकौडालाई एपरिटिफ्स भनिन्छ । इटलीको एंकोनामा ६० वर्षकी एक महिलालाई मस्तिष्कसम्बन्धि रोग लागेको थियो । डाक्टरले उनको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताए । तर शर्त एउटा थियो कि शल्यक्रिया गर्दा महिला सुत्नु हुँदैन । डेली मेलका अनुसार मध्य इटलीमा अवस्थित अजिन्डा ओसपेडाली रियुनिटी अस्पतालका न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेन्टका डा. रोबर्टो ट्रिगनानीले उक्त शल्यक्रिया गरेका हुन् । डाक्टरले शल्यक्रिया गर्दा जागा हुने बताएपछि महिलाले आफ्नै तरिकाले जागा हुने इच्छा व्यक्त गरिन् । यस्ता शल्यक्रियामा बिरामी प्यारालाइसिस हुने वा अट्याक आउने भएकाले बिरामीलाई सकेसम्म जागा न
विश्वका ८ अनौठा यौनकाण्ड
अदालतमा न्यायाधीशको च’र्तिकला एउटा अमेरिकी अदातलमा न्यायाधीशको टेबल पछाडि कृत्रिम महिला अं-गसहित न्यायाधीशलाई आ-पत्तिजनक अ’वस्थामा ‘फे’ला पारिएको समाचारले स-नसनी म-च्चाएको थियो । सन् २००६ मा ओक्लोहामा सहरको अदालतमा न्यायाधीश डोनाल्ड थम्पसन एउटा मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला उक्त कृ’त्रिम खे’लौना प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा मानिसहरूको नजरमा परेका थिए । उक्त कुरा सार्वजानिक हुनासाथ उनलाई जागिरबाट निकाली चार वर्षको जे-ल स-जाय सुनाइएको थियो । सिसी क्यामेराअघि पबबाट घरजान निस्किएका इंग्ल्यान्डका २५ वर्षीया केभिन तथा उनकी १९ वर्षीया गर्लफ्रेन्ड राति प्रहरीले राखेको सिसी क्यामेराको अगाडि नै अभिसाररात पाइएपछि प-क्राउ परेका थिए । उनीहरू सार्वजनिक स्थानमा अ-श्लील क्रि-याकलाप गरेको आरोप-मा पक्रा-उ पर्नुभन्दा पनि उनीहरूको गति-विधिको सिसिटिभी फुटेज आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेको
भनिन्छ नि “प्रेम अन्धो हुन्छ” । प्रेमको लागि मानिसहरु जे पनि गर्न तयार भएको देख्न र सुन्न पाइन्छ। यस्तै अन्धो प्रेमको अजीब घ’टना चीनमा घ’टेको छ। यो घट’नाले जो-कोहिलाई पनि चकित बनाइदिन सक्छ। दुई दिदी-बहिनीलाई एक-अर्काको पतिसँग प्रेम भएको घ’टना बाहिरिएको छ। बहिनीलाई भिनाजुसँग र दिदीलाई ज्वाईंसँग प्रेम भयो भन्दा जो-कोहिलाई पनि अचम्म लाग्छ। यो घ’टना चीनमा वास्तविक रुपमै घ’टेको अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले सम्प्रेषण गरेका छन्। यस्तो छ घटना : चीनको हुनान प्रान्तमा बस्ने एक सानो परिवारकी कान्छी छोरीको विवाह भयो। तर विवाह पछि कामको लागि पति टाढाको शहरमा पुगे। यस्तै परिवारकी जेठी छोरीको पनि विवाह भएको। बहिनिका पति काम गर्ने शहरमा दिदीको विवाह भएको थियो। संयोग यस्तो जूर्यो की कामको शिलशिलामा दिदी पट्टिका पति पनि घर भन्दा टाढाको बहिनिको शहर पुगे। एउटै शहरमा हुनाले दिदी र ज्वाईं, बहिनी र भिना
लण्डन : कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी बनिरहेको बेला ‘पोर्न साइट’हरुले भने कमाउने धन्धा बनाएका छन् । पछिल्लो समय थुप्रै पोर्न साइटहरुले ‘मास्क’ र भाइरलबाट जोगिने गाउन, अर्थात् ‘सूट’ पहिरिएर यौन सम्पर्क गरिराखेका भिडिओ पोस्ट गरेका छन् । ‘डिसर्टेड वुहान’, ‘टीएसए एजेन्ट डिटेन्स वुमन सस्पेक्टेड अफ कोरोना भाइरस’ जस्ता टाइटलका भिडिओ पोर्न साइटहरुले पोस्ट गरेको डेलीमेलले जनाएको छ । साथै पिपीइ अर्थात् विशेष खालको सूट, फेस मास्क तथा हस्पिटल गाउन जस्ता पहिरनमा यौन सम्पर्क गरिराखेका भिडिओ ती साइटले उत्पादन गरेका हुन् । चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसबाट ९५ हजार मानिस संक्रमित भइसकेका छन् । ८० भन्दा धेरै देशमा फैलिएको यो भाइरलका कारण ३ हजार २ सयजनाको मृत्यु भइसकेको छ । आम मानिसहरु जसरी ‘हरर मुभी’सँग नजिकिन्छन् त्यसै गरी कोरोना भाइरसको विषयसँग आकर्षित भएको पोर्न मुभी निर्मार्ता
के साइजले फरक पार्छ ? हो, कम्तिमा यी पुरुषहरुका लागिचाहिँ उनीहरुको यौनाङ्गको आकारले अवस्य पनि फरक पारिरहेको छ । आफ्नो यौनाङ्ग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लिङ्ग भएको दाबी उनीहरु गर्दछन् । त्यसरी दाबी गर्नेमध्ये एकजना पुरुषको यौनाङ्गको लम्बाई त १८ इन्च रहेको छ । निकै नै ठूलो यौनाङ्ग हुनु उनीहरुको सौभाग्य हो भन्ने ठान्छन् धेरै जना । तर उनीहरुको गुनासोचाहिँ बेग्लै छ। उनीहरुमध्येका एकजना पुरुष आफ्नो अति नै लामो यौनाङ्गकै कारण हलिउडमा प्रवेश गर्ने सपना तुहिएको बताउँछन् । हलिउड फिल्म निर्देशकले लामो यौनाङ्ग असोभनीय हुने र त्यसले दर्शकलाई विकर्षण पैदा गर्न सक्ने भन्दै उनलाई फिल्ममा अभिनय गर्नबाट रोके । लामो लिंग हुने अर्का व्यक्तिचाहिँ यौनाङ्गकै कारण आफू राम्रोसँग हिँडडुल गर्न नपाउने हुँदा आफ्नो नाम अपाङ्गको सूचीमा दर्ता गराउने सोचिरहेका छन् । अर्का एकजनालाई त ठूलो यौनाङ्गकै कारण एकपटक